Madaxda Khaliijka oo Shirka uga furmaya Kuwait
Lama huba in Shirka Berri, Talaado [December 5] uga firmaya dalka Kuwait madaxda wadamada Khaliijka uu wax ka bedeli doon khilaafka iyo kala qeybsanaanta Ururka Iskaashiga Khaliijka [GCC].
Shirka oo ah midkii 38aad waxaa la filayaa inay isagu yimaadaan boqorada dalalka lixda ah ee ku midoobay GCC, oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Qadar, Cumaan, Bahrain iyo Kuwait oo colaad xun u dhaxayso.
Lix bilood oo go'doomin dhulka, cirka iyo badda ayay kusoo rogeen Xulufadda Sacuudiga wadanka Qadar, oo ay ku eedeeyeen inuu taageero dhaqaale uu siiyo kooxaha argagaxisada caalamka.
GCC waa ururka ay siyaasad iyo dhaqaale ahaan ugu midoobeen Lixda dal ee Khaliijka,ee gacanka carabta ku yaalla, waxaana la aas-aasay 1981.
Dalalka waxaa ka dhaxeeyay xiriir ku salaysan dhaqaalo, iskaashiga dhanka amniga iyo dhaqanka, balse xiriirkaasi uu hadda meesha ka baxay, kadib markii dalalka ay Qadar ku eedeeyeen inuu ka dhaqmi waayay Siyaasadda iyo Mabaad'ida Ururka.
Qadar waxaa horyaalla hadda shuruudo ka badan 11, oo ay kamid yihiin inay joojiso xiriirka Iran, inay xirta saldhiga Turkiga ee Doha iyo Al Jazeera TV, si looga qaado xayiraadda saaran.
Su'aallo badan ayaa la iska waydiinayaa inay qabsoomi doono shirka Kuwait maadaama dalalka ay kala qeybsan yihiin, oo aan jirin xiriir ka dhaxeeya oo ay uga hadlaan shirka, rajada laga qabo inay heshiiyaana aad u yartahay.
Xoghayaha GCC - Gollaha Iskaashiga Khaliijka Abdullatif bin Rashid Al-Zayani ayaa gaarey Kuwait, wuxuuna la kulmay Amiirka dalkaasi Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah oo kawada hadleen diyaar-garowga Shirka.
Lama shaacin ajandaha shirka sanadka, laakiin waxaa jira rajooyin ah in khilaafka taagan looga hadlo.
Wasiirada Arrimaha Dibadda GCC ayaa maanta ku kulmay dalkaasi Kuwait iyagoo u gogol xaarayay Shir Madaxeedka GCC, oo sanadkiiba mar la qabto, loogna hadlo arrimaha gobolkaasi.
Dagaalka dhanka Warbaahinta
Kuwait kaalinta dhex-dhexaadin ayaa ka ciyaaraysaa khilaafka Khaliijka, waxaana amiirka dalkaasi uu la kulmay dhamaan dhinacyada, balse uu ku fashilmay inuu soo afjaro ismariwaaga taagan.
Dalalka ayaa isku dhaafsanayay Warbaahintooda erayo xanaf leh tan iyo markii uu khilaafkooda soo billowday June 5, 2017, mudo lix bilood hadda laga joogo.
Todobaadkii lasoo dhaafay, madaxa amniga Imaaraadka Dhahi Khalfan ayaa ku baaqay in la duqeeyo xarunta Al Jazeera ee magaalada Doha.
"Xulufada Sacuudiga waa inay duqeeyaan Xarunta Al Jazeera, waa TV u shaqeeya Argagaxisada, Daacish, Al Qaacida, Al Nusra Front, ayuu ku yiri Dhahi Khalfan qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Anwar Gargash ayaa isna ku eedeeyay Qadar inay taageerayso hadda Xuutiyiinta Yemen, oo wadamada Khaliijka ee Sacuudiga hormuudka u yahay ay la dagaalamayaan.
Dhanka kale, Agaasiimaha Warbaahinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qadar Ahmed bin Saeed al-Rumaihi ayaa been aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay eedayntan, isagoo ugu baaqay madaxda Imaaraadka inay joojiyaan dagaalka Warbaahinta.